ထိနျးမရ သိမျးမရတဲ့ ခပျဆိုးဆိုးကလေးတှဟော ဘာ့ကွောငျ့ အပြျောရှငျဆုံး ဖွဈရတာလဲ? - Chit MayMay
Home Parent Guide ထိနျးမရ သိမျးမရတဲ့ ခပျဆိုးဆိုးကလေးတှဟော ဘာ့ကွောငျ့ အပြျောရှငျဆုံး ဖွဈရတာလဲ?
ထိနျးမရ သိမျးမရတဲ့ ခပျဆိုးဆိုးကလေးတှဟော ဘာ့ကွောငျ့ အပြျောရှငျဆုံး ဖွဈရတာလဲ?
မိဘအမြားစုက သားသားမီးမီးတှကေို လိမ်မာတဲ့ကလေး၊ မိဘစကားနားထောငျတဲ့ ကလေးတှပေဲ ဖွဈစခေငျြကွပါတယျ။ ကလေးတှရေဲ့ စိတျက နားလညျနိုငျဖို့ အရမျးခကျခဲပါတယျ။ ကလေးဆိုတာ ဆိုးလိုကျရမှ ၊ လုပျခငျြတာလုပျလိုကျရမှ ကနြေပျကွတာပါ။ စိတျပညာရှငျတှကေတော့ ဆိုးပလေေးတှေ ဖွဈခွငျးက သူတို့ရဲ့ စိတျကနြေပျမှုကို အထောကျအကူ ပွုပေးနိုငျတယျလို့ အကွံပွုထားပါတယျ။ မမေတေို့ ကလေးဟာ ထိနျးခြုပျလို့ မရဘူးလို့ ခံစားရတဲ့အခါတိုငျး အသကျပွငျးပွငျးရှုပွီး သူတို့ဟာ အနာဂတျမှာ အောငျမွငျပွီး ဖှံဖွိုးတိုးတတျမယျ့သူတှလေို့ စဉျးစားတာက ပိုကောငျးနိုငျပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ နညျးနညျးပုနျကနျတတျတဲ့ မမေတေို့ရဲ့ ဆိုးပလေေးတှကေို ဘာ့ကွောငျ့ ဆိုးခှငျ့ ပေးသငျ့သလဲဆိုတဲ့ အကွောငျးရငျး (၉)ခုကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
၁။ သူတို့ဟာ အမှီခိုကငျးတဲ့သူတှဖွေဈပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို ထုတျဖျောပွောဆိုဖို့ မကွောကျကွပါဘူး
ကလေးတိုငျးမှာ သူတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျထူးခွားတဲ့ ကိုယျရညျကိုယျသှေးတှေ ရှိကွပါတယျ။ သို့သျော မိဘတှဟော ကလေးကို လှောငျအိမျထဲမှာ အမွဲတမျးထားဖို့ ကွိုးစားလြှငျ သူတို့ရဲ့ လိုအငျဆန်ဒ အစဈအမှနျနဲ့ ဆန်ဒတှကေို ဆုံးဖွတျနိုငျစှမျးနှငျ့ self-expression (ကိုယျ့ခံစားခကျြကို ထုတျဖျောခွငျး) ကဲ့သို့သော ပွဿနာတှကေို ခံစားရနိုငျပါတယျ။ ဆိုးပလေေးတှဟော တခွားသူတှေ ခငျြ့ခြိနျနခြေိနျမှာတောငျ သူတို့ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ သူတို့လုပျသူတှဖွေဈပွီး သူတို့ရဲ့ စရိုကျအမှနျကို ပွသဖို့ မကွောကျကွပါဘူး။
၂။ သူတို့ရဲ့ လောကကို ထိထိရောကျရောကျ စူးစမျးတဲ့ နညျးလမျးဖွဈပါတယျ
ကလေးဆိုတာမြိုးက တဈမိနဈမှတောငျ အေးအေးဆေးဆေး မနနေိုငျကွတဲသူတှပေါ။ လကျက အငွိမျနရေငျတောငျ ပါးစပျက လှုပျနရေမှ ကနြေပျကွသူတှပေါ။ မိဘတှကေ တိတျတိတျဆိတျဆိတျ နဖေို့ ဖိအားပေးလြှငျ ကလေးတှမှော လောကကွီးကို စူးစမျးဖို့ အခှငျ့အရေး ဆုံးရှုံးပါတယျ။ သောငျးကနျြးတတျတဲ့ ကလေးတှဟော စူးစမျးခငျြစိတျရှိသူတှဖွေဈသလို သူတို့ရဲ့ အလိုဆန်ဒတှကေို ဖိနှိပျခြုပျခယျြထားမှု မရှိတာကွောငျ့ လညျလညျဝယျဝယျ လူကွီးတှဖွေဈလာနိုငျဖှယျ ပိုမြားပါတယျ။
၃။ ကလေး သဘာဝအတိုငျး နထေိုငျတတျလို့ပါ
ကလေးအမြားစုရဲ့ သဘာဝက အရမျး active ဖွဈကွပွီး နညျးနညျး ဆိုးတတျကွပါတယျ။ သူတို့ ရဲ့ အတှအေ့ကွုံအမြားစုကို ပွုလုပျကွညျ့ဖို့နဲ့ သူတို့ရဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ဖျောပွဖို့ မကွောကျကွပါဘူး။ ကလေးတဈယောကျဟာ မကျြစိနောကျလောကျအောငျ ပွုမှုနလြှေငျ ဒါက သူတို့ပြျောရှငျပွီး ယုံကွညျမှုရှိနတေဲ့ အဓိပ်ပာယျပါ။
၄။ သူတို့ရဲ့ စိတျခံစားခကျြတှကေို ပိုကောငျးအောငျ စီမံနိုငျကွပါတယျ
ဂဈြတိဂဈြကနျကလေးတှဟော သူတို့ရဲ့ စိတျခံစားခကျြတှကေို connected ဖွဈဖို့ လှယျပွီး သူတို့ အရှယျရောကျလာတဲ့အခါမှာ သူတို့အပွုအမူတှရေဲ့ ဇဈမွဈကို နားလညျကွပါတယျ။ ဒီကလေးတှဟော သူတို့ရဲ့ စိတျခံစားမှုနှငျ့ ပတျသတျလာတဲ့အခါ ရငျ့ကကျြတာ ပိုမြားပါတယျ။းသူတို့ရဲ့ စိတျခံစားမှုတှဟော သူတို့ဘဝရဲ့ အရေးပါတဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈကွောငျးနဲ့ တခွားလူတှရေဲ့ စိတျခံစားခကျြတှကေို လေးစားပွီး အသိအမှတျပွုရမယျဆိုတာ နားလညျသဘောပေါကျကွပါတယျ။
၅။ တခွားလူ ပွောသမြှကို နားမထောငျတတျကွပါဘူး
ဆိုးတဲ့ ကလေးတှဟော တဈခုခုဆိုရငျ ခှငျ့ပွုခကျြရှာနကွေမှာ မဟုတျပါဘူး။ သူတို့အတှကျ ဘယျအရာက ကောငျးတယျဆိုတာ သိပွီး ကိုယျ့လမျးကွောငျးကိုယျ လြှောကျဖို့ မကွောကျကွပါဘူး၊၊ သူတို့ ကရြှုံးရငျတောငျ ကမ်ဘာကွီး အဆုံးသတျသှားမှာ မဟုတျတာကို သိကွပါတယျ။ ဒီလိုကလေးတှဟော သူမြားအမွငျကို သိပျဂရုစိုကျတဲ့သူတှေ မဟုတျတာကွောငျ့ သူတို့ကို ပွဈတငျဝဖေနျတာတို့ ၊ ရယျစရာလုပျတာတို့ကို ရှကျကွောကျနမှော မဟုတျပါဘူး။
၆။ သူတို့ကို သူမြားခဈြခငျလာအောငျ အမြားကွီးမကွိုးစားပါဘူး
ဆိုးတဲ့ ကလေးတှဟော မိဘတှကေ သူတို့ဘယျလိုပဲဆိုးဆိုး ခဈြလိမျ့မယျဆိုတာ သိကွပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ခံစားခကျြကို မွုံမထားတတျကွပါဘူး။
၇။ သူတို့မှာ ပွဿနာ ဖွရှေငျးနိုငျတဲ့ စှမျးရညျကောငျးတှေ ရှိကွပါတယျ
နာခံမှုရှိတဲ့ ကလေးတှဟော လူကွီးတှေ ဖွဈလာတဲ့အခါမှာ အရမျးကို သတိထားလှနျးပွီး အလှနျအကြှံလိုကျနာတာတှေ ဖွဈလာပါတယျ။ ခပျဆိုးဆိုး ကလေးတှမှော ပငျကိုယျစဆေ့ျောမှု ပိုရှိပါတယျ။ ဒုက်ခတှထေဲက ထှကျရဖို့ မတူညီတဲ့ ခဉျြးကပျမှုတှကေို ကွိုးစားဖို့ အဆငျသငျ့ရှိနပေါတယျ။ သူတို့ဟာ စိတျဖိစီးမှုကို ပိုခံနိုငျရညျရှိပွီး ကိုယျ့ဘာသာ ရပျတညျနိုငျကွပါတယျ။
၈။ သူတို့မှာ ဖနျတီးမှု ပိုရှိကွပါတယျ
ခပျဆိုးဆိုး ကလေးတှဟော စိတျကူးကှနျ့မွူးနိုငျစှမျး အကနျ့အသတျရှိပွီး အိုငျဒီယာထုတျဖို့ စိတျအားထကျသနျကွပါတယျ။ လူကွီးတှေ ဖွဈလာတဲ့အခါ ဒီကလေးတှဟော သူတို့ကိုယျသူတို့ ထုတျဖျောပွောရမှာကို မကွောကျကွသလို တခွားသူတှရေဲ့ အမွငျက သူတို့ဘဝကို လှမျးမိုးလှနျးမှာ မဟုတျတာကို သိကွပါတယျ။
၉။ သူတို့ကိုယျသူတို့ ကောငျးတယျဆိုတာ သိကွပါတယျ
ကလေးဆိုးလေးတှဟော ခွှငျးခကျြမရှိ ခဈြခွငျးကို ခံထိုကျတယျလို့ ယုံကွညျကွပွီး အပွုအမှုကောငျးတှလေုပျပွီး အခဈြတှရေလာအောငျ ကွိုးစားဖို့ မလိုတာကို သိကွပါတယျ။ သူတို့ကိုယျသူတို့ ကောငျးပွီးသား၊ သကျသပွေစရာ မလိုဘူးလို့ ခံယူထားကွပါတယျ။ သူတို့ဟာ ကိုယျကောငျးဖို့အတှကျ ကိုယျလုပျတာ၊ သူမြားနှဈသကျလာဖို့ လုပျတာမဟုတျဘူးလို့လညျး ခံယူထားကွပါတယျ။
ထိန်းမရ သိမ်းမရတဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုးကလေးတွေဟာ ဘာ့ကြောင့် အပျော်ရွင်ဆုံး ဖြစ်ရတာလဲ?
မိဘအများစုက သားသားမီးမီးတွေကို လိမ္မာတဲ့ကလေး၊ မိဘစကားနားထောင်တဲ့ ကလေးတွေပဲ ဖြစ်စေချင်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်က နားလည်နိုင်ဖို့ အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ ကလေးဆိုတာ ဆိုးလိုက်ရမှ ၊ လုပ်ချင်တာလုပ်လိုက်ရမှ ကျေနပ်ကြတာပါ။ စိတ်ပညာရှင်တွေကတော့ ဆိုးပေလေးတွေ ဖြစ်ခြင်းက သူတို့ရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုကို အထောက်အကူ ပြုပေးနိုင်တယ်လို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ မေမေတို့ ကလေးဟာ ထိန်းချုပ်လို့ မရဘူးလို့ ခံစားရတဲ့အခါတိုင်း အသက်ပြင်းပြင်းရှုပြီး သူတို့ဟာ အနာဂတ်မှာ အောင်မြင်ပြီး ဖွံဖြိုးတိုးတတ်မယ့်သူတွေလို့ စဉ်းစားတာက ပိုကောင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ နည်းနည်းပုန်ကန်တတ်တဲ့ မေမေတို့ရဲ့ ဆိုးပေလေးတွေကို ဘာ့ကြောင့် ဆိုးခွင့် ပေးသင့်သလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း (၉)ခုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ သူတို့ဟာ အမှီခိုကင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ မကြောက်ကြပါဘူး
ကလေးတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် မိဘတွေဟာ ကလေးကို လှောင်အိမ်ထဲမှာ အမြဲတမ်းထားဖို့ ကြိုးစားလျှင် သူတို့ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒ အစစ်အမှန်နဲ့ ဆန္ဒတွေကို ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနှင့် self-expression (ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်ခြင်း) ကဲ့သို့သော ပြဿနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဆိုးပေလေးတွေဟာ တခြားသူတွေ ချင့်ချိန်နေချိန်မှာတောင် သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ သူတို့လုပ်သူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ စရိုက်အမှန်ကို ပြသဖို့ မကြောက်ကြပါဘူး။
၂။ သူတို့ရဲ့ လောကကို ထိထိရောက်ရောက် စူးစမ်းတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်
ကလေးဆိုတာမျိုးက တစ်မိနစ်မှတောင် အေးအေးဆေးဆေး မနေနိုင်ကြတဲသူတွေပါ။ လက်က အငြိမ်နေရင်တောင် ပါးစပ်က လှုပ်နေရမှ ကျေနပ်ကြသူတွေပါ။ မိဘတွေက တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် နေဖို့ ဖိအားပေးလျှင် ကလေးတွေမှာ လောကကြီးကို စူးစမ်းဖို့ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးပါတယ်။ သောင်းကျန်းတတ်တဲ့ ကလေးတွေဟာ စူးစမ်းချင်စိတ်ရှိသူတွေဖြစ်သလို သူတို့ရဲ့ အလိုဆန္ဒတွေကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားမှု မရှိတာကြောင့် လည်လည်ဝယ်ဝယ် လူကြီးတွေဖြစ်လာနိုင်ဖွယ် ပိုများပါတယ်။
၃။ ကလေး သဘာဝအတိုင်း နေထိုင်တတ်လို့ပါ
ကလေးအများစုရဲ့ သဘာဝက အရမ်း active ဖြစ်ကြပြီး နည်းနည်း ဆိုးတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့ အတွေ့အကြုံအများစုကို ပြုလုပ်ကြည့်ဖို့နဲ့ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြဖို့ မကြောက်ကြပါဘူး။ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ မျက်စိနောက်လောက်အောင် ပြုမှုနေလျှင် ဒါက သူတို့ပျော်ရွင်ပြီး ယုံကြည်မှုရှိနေတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။
၄။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ပိုကောင်းအောင် စီမံနိုင်ကြပါတယ်
ဂျစ်တိဂျစ်ကန်ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို connected ဖြစ်ဖို့ လွယ်ပြီး သူတို့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ သူတို့အပြုအမူတွေရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို နားလည်ကြပါတယ်။ ဒီကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုနှင့် ပတ်သတ်လာတဲ့အခါ ရင့်ကျက်တာ ပိုများပါတယ်။းသူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေဟာ သူတို့ဘဝရဲ့ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနဲ့ တခြားလူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို လေးစားပြီး အသိအမှတ်ပြုရမယ်ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။
၅။ တခြားလူ ပြောသမျှကို နားမထောင်တတ်ကြပါဘူး
ဆိုးတဲ့ ကလေးတွေဟာ တစ်ခုခုဆိုရင် ခွင့်ပြုချက်ရှာနေကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အတွက် ဘယ်အရာက ကောင်းတယ်ဆိုတာ သိပြီး ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကိုယ် လျှောက်ဖို့ မကြောက်ကြပါဘူး၊၊ သူတို့ ကျရှုံးရင်တောင် ကမ္ဘာကြီး အဆုံးသတ်သွားမှာ မဟုတ်တာကို သိကြပါတယ်။ ဒီလိုကလေးတွေဟာ သူများအမြင်ကို သိပ်ဂရုစိုက်တဲ့သူတွေ မဟုတ်တာကြောင့် သူတို့ကို ပြစ်တင်ဝေဖန်တာတို့ ၊ ရယ်စရာလုပ်တာတို့ကို ရှက်ကြောက်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၆။ သူတို့ကို သူများချစ်ခင်လာအောင် အများကြီးမကြိုးစားပါဘူး
ဆိုးတဲ့ ကလေးတွေဟာ မိဘတွေက သူတို့ဘယ်လိုပဲဆိုးဆိုး ချစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်ကို မြုံမထားတတ်ကြပါဘူး။
၇။ သူတို့မှာ ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကောင်းတွေ ရှိကြပါတယ်
နာခံမှုရှိတဲ့ ကလေးတွေဟာ လူကြီးတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ အရမ်းကို သတိထားလွန်းပြီး အလွန်အကျွံလိုက်နာတာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ခပ်ဆိုးဆိုး ကလေးတွေမှာ ပင်ကိုယ်စေ့ဆော်မှု ပိုရှိပါတယ်။ ဒုက္ခတွေထဲက ထွက်ရဖို့ မတူညီတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုတွေကို ကြိုးစားဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ သူတို့ဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကို ပိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ရပ်တည်နိုင်ကြပါတယ်။
၈။ သူတို့မှာ ဖန်တီးမှု ပိုရှိကြပါတယ်
ခပ်ဆိုးဆိုး ကလေးတွေဟာ စိတ်ကူးကွန့်မြူးနိုင်စွမ်း အကန့်အသတ်ရှိပြီး အိုင်ဒီယာထုတ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်ကြပါတယ်။ လူကြီးတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဒီကလေးတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ထုတ်ဖော်ပြောရမှာကို မကြောက်ကြသလို တခြားသူတွေရဲ့ အမြင်က သူတို့ဘဝကို လွှမ်းမိုးလွန်းမှာ မဟုတ်တာကို သိကြပါတယ်။
၉။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်
ကလေးဆိုးလေးတွေဟာ ခြွင်းချက်မရှိ ချစ်ခြင်းကို ခံထိုက်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပြီး အပြုအမှုကောင်းတွေလုပ်ပြီး အချစ်တွေရလာအောင် ကြိုးစားဖို့ မလိုတာကို သိကြပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကောင်းပြီးသား၊ သက်သေပြစရာ မလိုဘူးလို့ ခံယူထားကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကိုယ်ကောင်းဖို့အတွက် ကိုယ်လုပ်တာ၊ သူများနှစ်သက်လာဖို့ လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ခံယူထားကြပါတယ်။
Previous articleသငျ့ကလေးဟာ ဉာဏျကွီးရှငျ တဈယောကျဖွဈနိုငျကွောငျး သိစမေယျ့ လက်ခဏာ (၁၀)ခကျြ
Next articleခဈြခွငျးမတ်ေတာနဲ့ ပတျသတျပွီး ကလေးတှေ ဘာတှေ သိဖို့လိုသလဲ?